Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahrain na -agbasa » Ndị isi Middle East: Iduzi ụgbọelu na 2021
Ndị ọkwọ ụgbọ elu Middle East dị egwu Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
Middle East na-ekere òkè dị mkpa na ụgbọ elu ruo ogologo oge, mana ọ bụ na iri afọ ole na ole gara aga ka ọ rụpụtara n'ezie. Ọ na-agbanwe ụzọ ndị mmadụ si aga njem mba ụwa, na-anabata mgbanwe dị ala, ma na-agbanwe ya maka mkpa ahịa ya.
Ụkpụrụ ụgbọ elu Middle East na -ewetara ndị njem ọkwa nkasi obi, ọrụ na ihe eji enyere ndụ aka.
COVID-19 etiela ụlọ ọrụ ụgbọ elu gburugburu ụwa ike na nsogbu ya niile.
N'ime ọnwa ise mbụ nke 5, ọkwa ikike belatara ihe dị ka ọkara ma e jiri ya tụnyere ọkwa ọrịa na-efe efe.
Data okporo ụzọ IATA maka Machị 2021 gosipụtara ikike belatara pasent 80 ma e jiri ya tụnyere Machị 2019. Mgbake a na -eme, na ọtụtụ ụwa na -amalite imepe, mana ụzọ dị n'ihu ka bụ ihe ịma aka.
Na a na-adịbeghị anya CAPA - forlọ Ọrụ Maka Ikuku Ihe omume ndụ, Richard Maslen, onye na -ahụ maka ọdịnaya Europe maka CAPA kwuru, sị: "Enweghị ike ịgọnarị onye ndu n'akụkụ ọ bụla nke ụgbọ elu na 2021, 2022, na n'ihu, ga -adị nnọọ iche karịa ka ọ dị na mbụ."
Gụọ - ma ọ bụ gee ntị - mkparịta ụka a na -enye nkọwa na nke bịara n'oge Ụgbọ elu nke Middle East ndị na -eti ihe nke ukwuu Arab Air Carriers Organization (AACO) Secretary General Abdul Wahab Teffaha, Qatar Airways Chief Transform Officer Thiery Antinori, na Gulf Air Acting CEO Waleed Al Alawi.
Mmetụta nke COVID-19 chọrọ ka ndị ọrụ ụgbọ elu niile tụleghachi usoro ha, mepụta ihe ọhụrụ na ime mgbanwe maka usoro ụwa ọhụrụ. Kọmitii na -eche echiche oge niile abịala na etiti ọwụwa anyanwụ na anyị nwere obi ụtọ isonye na Maazị Abdul Wahab Teffaha, onye odeakwụkwọ ukwu nke Arab Air Carriers Organization, Mr. Thiery Antinori, onye isi azụmahịa na Qatar airways, na Mr Waleed Al Alawi, onye isi oche nke Gulf Air. Yabụ na echere m na ọ dị ezigbo mkpa ibido, iji nweta nghọta mpaghara na etu COVID siri merie ya n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga. Yabụ Mr Abdul Wahab Teffaha, ị nwere ike ịnye anyị obere okwu mmeghe maka etu COVID si kụọ Middle East na ụgbọ elu Arab na ihe ọnọdụ dị ugbu a?
Page 1 nke 5 Na Mbụ Osote